I-China others Factory, abanye abahlinzeki
Isihlanganisi se-vacuum emulsifying sakhiwe futhi senziwa ngu JINGYE iyi-kettle ehlakazeka futhi ichithe inqubo yohlelo lwe-homogenizing yocwaningo nokukhiqizwa kokuxubana kwezinto eziphezulu ze-viscous.
Isistimu ifakwe ngohlelo olushukumisayo, i-homogenizing/ emulsifying uhlelo, uhlelo lokushisa, uhlelo lokucindezela umshini, uhlelo lokushisa nokucindezela ukuzwa, uhlelo lokuphakamisa, uhlelo lokulawula kagesi kanye nesikhulumi sokusebenza, njll.
Kukhona uhlobo lokuhlola, uhlobo lomshayeli kanye nohlobo lokukhiqiza lwezimboni lwamakhasimende angalukhetha, futhi anganikeza insizakalo eyenziwe ngezifiso ngokuya ngezidingo zenqubo ezihlukile zamakhasimende.
JINGYE RO I-Water Treatment isebenzisa ubuchwepheshe be-RO ukwelapha amanzi，I-RO wuhlobo olulodwa lobuchwepheshe bokuhlukanisa ulwelwesi obusebenzisa umehluko wengcindezi yolwelwesi ukuhlukanisa amanzi aluhlaza kusuka kusixazululo esinamandla kuya kwesibuthakathaka. Kuyafaneleka ukwelapha cishe lonke uhlobo lwamanzi aluhlaza njengamanzi emifula, amanzi okusakaza, amanzi omfula, amanzi emvula, amanzi ompompi (amanzi abilayo) namanzi olwandle. Ngokuvamile, kuyindlela eyonga kakhulu yokususa usawoti emanzini amunyu namanzi olwandle. Ayinakho ukuphatha amakhemikhali okuyingozi futhi ifanele indawo ehlanzekile.
JINGYE Colloidal MI-ill yakhiwa ngokugaya ikhanda izingxenye, i-base transmission part, i-motor ekhethekile izingxenye ezintathu.
JINGYE Ezezimboni I-Deep Fryer, iqukethe ibhodwe elithosiwe, ifreyimu ye-SS, ipayipi lokushisa, ibhokisi lokulawula ugesi, ubhasikidi othosiwe, umshisi wegesi, i-valve valve, isihlungi uhlelo;
I- Ezezimboni I-Deep Fryer inezici zokusebenza okulula, ukukhuphuka kokushisa okusheshayo, ukulawula okuhle kokushisa, ukusebenza kahle okuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, impilo ende yokusebenza, isakhiwo esihlangene, ukugcinwa okulula nokunye.
JINGYE Ezezimboni Pressure Cooker kuyinto ebizwa nangokuthi ingcindezi yezimboni, ingukuthi a ingcindezi ukupheka umkhumbi onesembozo esivaliwe, qinisekisa ukupheka umkhiqizo ngaphansi kwengcindezi.
I-JINGYE Steam Jacketed Kettles ine- okukhethekile ngezansi kwe-hemisphere ngendlala yebhantshi egcwele, futhi kushubile nge iqiniso ungqimba wejacket hemispherical, qinisekisa ukuthi okokusebenza kushiswa ngokulinganayo ngenkathi kuphekwa ngobuningi.
Futhi ngenxa yaphansi, indawo yokushisa inkulu, isiza amakhasimende ukuthola imiphumela yokushisa esheshayo ngamandla amancane.
Ngaphezu kwalokho, Ukushisa okungekho ngqo nokulawula okunembile kokushisa, ukudla kunqobile’t shiswa futhi asikho isidingo sokuqapha njalo.
Ngaphandle kwalokho, sinezinhlobo ezahlukahlukene zokuxuba, kumakhasimende ahlukile ukufeza umphumela omuhle wokuxuba.